Crisis in Zimbabwe Coalition Archives - What's On In Harare
Home Crisis in Zimbabwe Coalition
Harare News 18 September 2021
Crisis in Zimbabwe Coalition is shocked and dismayed at the malicious falsehoods published by a little-known online paper alleging that 11 terror suspects (members of the Coalition) were arrested at a safe house in Norton today September 18, 2021. Source: Crisis Coalition Statement on Alleged Terrorist Activities – The Zimbabwean To set the record straight, Crisis […]
The post Crisis Coalition Statement on Alleged Terrorist Activities appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 6 August 2021
Crisis in Zimbabwe Coalition, an umbrella body of civic society organisations operating in Zimbabwe calls for peace and respect of citizens’ fundamental rights ahead of elections in Zambia. Source: Crisis in Zimbabwe Coalition Statement ahead of elections in Zambia – The Zimbabwean Reports of clashes between supporters of the ruling party, the Patriotic Front (PF) […]
The post Crisis in Zimbabwe Coalition Statement ahead of elections in Zambia appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 14 March 2021
HARARE – MDC Alliance leader Nelson Chamisa says the judiciary is joined at the hip with Zanu PF, and his party has lost confidence that the courts can fairly arbitrate political disputes involving the parties. Source: Chamisa loses hope in judiciary, says turning to ‘stadium of the people’ – The Zimbabwean Reflecting on several controversial […]
The post Chamisa loses hope in judiciary, says turning to ‘stadium of the people’ appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 27 January 2021
HARARE – Human rights and political activists have condemned Monday’s announcement by government that the Covid-19 vaccine will only be availed to government ministers, legislators, soldiers, police, health workers and other top government officials. Source: Anger over govt plan to only give vaccine to ministers, soldiers, MPs and top officials – The Zimbabwean The position […]
The post Anger over govt plan to only give vaccine to ministers, soldiers, MPs and top officials appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 15 October 2020
“Govt insincere in addressing the plight of teachers”
THE stance being taken by the government of Zimbabwe on negotiations with teachers has proved beyond a reasonable doubt that the so-called ‘new dispensation’ has failed to walk the talk in as far as addressing the plight of educators and providing quality education is concerned. Source: “Govt insincere in addressing the plight of teachers” – The […]
The post “Govt insincere in addressing the plight of teachers” appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 5 October 2020
The Crisis in Zimbabwe Coalition (CiZC) wishes thousands of Zimbabwean Teachers a wonderful World Teachers Day today, 05th of October 2020. Source: Crisis Coalition Statement on World Teachers Day – The Zimbabwean This year’s commemoration is held under the theme “Teachers: Leading in Crisis, Reimagining the Future”. We acknowledge the thousands of teachers who continue to […]
The post Crisis Coalition Statement on World Teachers Day appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …